IMonkey Horoscope 2021: Jonga Phambili kwinkqubela phambili - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
IMonkey Horoscope 2021: Jonga Phambili kwinkqubela phambili
Zihlobo zenkawu, ngokuqinisekileyo ungalindela ithamsanqa kunye nempumelelo kulo nyaka. Lixesha lokuba ubhiyozele ukusebenza nzima kwakho uhlawula ngo-2021.
Monkey othandekayo, uza kuzalisekiswa ngokupheleleyo kuwo wonke unyaka we-Oxal Metal! Maninzi amathuba azakuvela kuwe, kwaye ukuba uyaphumelela ukuwasebenzisa, uya kuthi emva koko uqhubeke wenze amanyathelo amahle enkqubela phambili aya kukuzalisa ngovuyo. Jonga i-2021 Monkey Chinese horoscope yaseTshayina ebhalwe ngokukodwa yingcali yethu yokuvumisa ngeenkwenkwezi yaseTshayina.
Yintoni egcinelwe ubomi bakhe bothando ngo-2021?
Funda uqikelelo lwehoroscope ka-2021
Impembelelo yoNyaka we-Ox iya kukukhuthaza. Inkqubo ye- Umsebenzi onzima uya kuwongwa kwaye uya kuziva izibonelelo zomsebenzi wakho. Amathuba amahle azakuzibonakalisa kuwe kwaye uya kuwaxhakamfula ukuze uqhubele phambili, wenze izinto ezintsha, wenze amahlakani amatsha, kodwa ngaphezulu kwako konke, uya konwaba.
-Jonga uqikelelo lwezinye iimpawu kwi-Chinese horoscope 2021. -
Unethemba kwaye ukhululekile, uphefumla uvuyo lobomi kunye nokuhleka okuhle. Unobuqili kwaye uyadlala, ulumkile kwaye unolwazi olukhawulezileyo, ufunda ngokukhawuleza kwaye uyayithanda imiceli mngeni evuselela iiseli zakho zobuchopho. Ukuhlalisana kunye nokunxibelelana, unesiphiwo sokwenza abafowunelwa kunye nokuzingqonge nabahlobo. Unentembelo engagungqiyo kwisiqu sakho kwaye uyakwazi ukuyitshata ikhosi yakho ngokulunga kunye nokuziqhenya. Kokwakho, ubomi kufanele ukuba buphilwe njengendima yokudlala.
-Fumanisa eyakho Ubuntu beTshayina zodiac Apha -
inombolo yenombolo engu-33 enentsingiselo
Ubomi bakho bothando ngo-2021
Umtsalane, uqhelekile, unesiphiwo solonwabo, uzincamathelisa ngaphandle kokubuza imibuzo emininzi kwaye ukhethe ukuhlala ngoku. ULucid, ukhetha i-adrenaline rush yoloyiso kwi-monotony yobomi obuzinzileyo nobucocekileyo. Ukuze ubambe iliso lakho, abantu kufuneka babe nengqondo entle yamahlaya, boyise ingqondo yakho, kwaye bakuthande ngaphandle kokulindela imbuyekezo enkulu.
Ngubani ohambelana kakuhle naye?
Zonke izibane ziluhlaza kunye Impuku xa kuziwa ekuphuhliseni ubuhlobo obuhle kunye nokwenza ishishini elifanelekileyo. Ngokuthi 'ewe' kwi Inyoka , Uya kwenza isibini esintsomi, phantsi komqondiso wethamsanqa kunye nempumelelo. Inkqubo ye- Inyoka iya kuba liqabane elihle leqela, kunye neqabane eliqaqambileyo. Kunye Ihagu , uyakuxhamla kwisivumelwano esikhulu sothando.
-Ukufumana ulwazi ngakumbi, jonga eyakho Ukuhambelana kweChina ne-zodiac . -
Uya kuba njani unyaka we-Metal Ox kuwe?
Iya kuba ngunyaka omangalisayo kwiNkawu eya kuthi yazi ukuba izisa njani isikhephe sayo kwizibuko elilungileyo. Eyakho Ubungcali bobuchwephesha buza kukunika iwaka elinye lamathuba okuzahlula kwaye ubonise izakhono zakho. Izimali zakho ziya kuba nempumelelo kwaye ubomi bakho ekuhlaleni buya kufana nezinto ezimangazayo ezimnandi kunye nokudibana okutsha.
Intwasahlobo yaseTshayina ukusuka ngoLwesithathu, ngoFebruwari 3 ukuya ngoLwesibini, ngoMeyi 4, 2021
Ngaphandle kwetempo yeYin yonyaka, ifayibha yakho yobuchwephesha iya kunyuka iphindwe kalishumi. Uya kuthi ngovuyo ujike emdiliyeni uye kumdiliya ukuze ukhulise ishishini lakho.
athetha ukuthini amanani angama-444 ngokwasemoyeni
Ukusukela ngoFebruwari ukubheka phambili, i-Ox eyomeleleyo neyonyamezelayo iya kuseta ithoni kwaye ibeke ukubulaleka ngaphambili. Uya kukwazi zinike konke okusemandleni akho, uzinzise iiasethi zakho, uqhubele phambili nomsebenzi wakho okanye ufumane umsebenzi omtsha kuluhlu lwakho lwezakhono. Nangona kunjalo, kuya kufuneka wenze izinto ngencwadi kwaye uthembeke. Kananjalo, akukho sidingo sokuzibekela amangomso izinto, ukukopela okanye ukuzibeka phambili, kuba oku kuya kuba yingozi kuwe. Kwelinye icala, ubuchule bakho kunye nomoya wokhuphiswano kuya kukunceda ukuba uhlangabezane nemiceli mngeni kwaye uzinyanzele.
Ngehlobo laseTshayina ngolwesiThathu, ngoMeyi 5 ukuya ngolwesiHlanu, Agasti 6, 2021
Ngeli xesha lasehlotyeni, uya kuphila ngokuhambelana namabhongo akho kwaye wenze konke okusemandleni akho ukubonakala kwisihlwele.
Ngomhla ka-Meyi, uya kuyilola ingqiqo yakho yesicwangciso kwaye usebenzise ubudlelwane bakho obuninzi ukuseta amanyathelo athile exesha elizayo. Ukuzimisela nokuzimisela ngakumbi kunangaphambili, uya kujongeka ume ngaphandle kwesihlwele, ngakumbi ukuba ujonge phezulu. Kwicala lezemali, uloyiko lwakho lokulahleka luyakukhuthaza ukuba ubambe okwethutyana indlela ophila ngayo kwaye usebenze iiyure ezimbalwa. Kwinqanaba leemvakalelo, uya kuvula iingcango zentliziyo yakho kumntu ongamazi kakuhle ngoncumo olonakalisayo.
Ukwindla kwaseTshayina ngoMgqibelo, Agasti 7 ukuya ngoMgqibelo, Novemba 6, 2021
Uya kuzinika ixesha lokuphumla ukuze ubuye namandla ngoSeptemba.
Nge-Agasti, uyakufumanisa kunzima ukuyiyeka ngokobuchwephesha, kodwa ungavumeli ukuba uxinzelelo lukuyekise! Uya kufumanisa umbono omtsha ngobomi, wenze abahlobo abatsha kwaye wanelise umnqweno wakho wokufuna ukwazi ngelixa utyebisa ii-neurons zakho. Kwicala lothando, uya kulungelelanisa ingokuhlwa yothando ukubhiyozela uSuku lweValentine (14/8). NgoSeptemba, uza kububona ubomi buvela kwelinye icala kwaye ujonge phambili ekuvuseleleni imisebenzi yakho yobungcali. Ngo-Okthobha, awuyi kuyigcina iinzame zakho kwaye uyakuxhamla kubunzima obungalindelekanga obuya kukhulisa ikhondo lakho lomsebenzi (malunga ne-14/10).
NgeCawa yasebusika yase-China, nge-7 ka-Novemba ngo-2021 ukuya kuLwesine, ngo-Februwari 3, 2022
Ngeli xesha lokugqibela lonyaka, uya kuba nezizathu ezininzi zokuvuya kunye nokubhiyozela.
NgoNovemba, uya kulawula jonga kwicala eliqaqambileyo lobomi kwaye ujonge kwizinto ezintle. Uya kuchitha ngokuhlwa okunomtsalane apho kuya kuba kuhle ukwenza izinto eziphambeneyo ngomzimba wakho kunye nokugungqa phantsi kwe-quilt. Eofisini uyakuqhubeka nesantya. NgoJanuwari, lixesha lokuba unxibelelane nabantu! Uya kuthi ngokuzithandela uchithe ixesha emnxebeni kwaye uthumele ii-imeyile kubahlobo bakho abaninzi kunye namahlakani ukuze ugcine unxibelelwano kunye nokugcina ubudlelwane bakho. Inkawu ehloniphekileyo, Unyaka we-Ox uya kuba ulungile. Ngamana unyaka weTiger, olandelayo, ube ulungile.
Fumanisa ikamva lakho ngehoroscope yakho yemihla ngemihla
Ngaba unyaka olungileyo? Fumanisa kwihoroscope yakho yonyaka
Luthini uphawu lwam olunyukayo?
Ngowuphi uMdumisi oMlinganayo ohambelanayo nophawu lwam lweZodiac?
Ingelosi ka-Lehahiah Guardian ikunika unyamezelo kunye nomonde
indlela yobomi 11 2
yintoni nyana wam
ukuhambelana kwesagittarius kunye ne-sagittarius
inani elinentsingiselo engama-55
indlela yobomi 3 kunye ne-8 yokuhambelana